Maamulka gobalka Hiiraan oo beeniyay in la musuq maasuqay gargaarka loogu talay shacabka Baladweyn – Radio Muqdisho
Maamulka gobalka Hiiraan oo beeniyay in la musuq maasuqay gargaarka loogu talay shacabka Baladweyn
Guddoomiyaha maamulka gobalka Hiiraan Cali Maxamuud Caraale oo wareysi siiyay Radio Muqdisho ayaa beeniyay in la musuq maasuqay gargaarka loogu tala galay dadka ku dhibaateysan magaalada Beladweyne ee xarunta gobalka Hiiraan.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in dad Shalay lagu qabtay Beladweyne aysan aheyn kuwa sameeyay musuq maasuq balse ay ahaayeen darawaliin iyo shaqaale kale oo ay kawar qabeen masuuliyiinta gobalka iyo Madaxda Hirshabeelle.
Saraakiisha Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida qaybta Gobalka Hiiraan ayaa shalay sheegay in ay soo qabteen gaadiid uu ku rarnaa gargaar la musuq maasuqay iyo dadkii watay, hase yeeshee Guddoomiyaha Gobalka ayaa warkaasi beeniyay.
Dhinaca kale waxaa wali taagan dhibaatooyin daran oo ay shacabka Gobalka Hiiraan ka dhaxleen fatahaadii wabiga Shabeelle uu ka sameeyay magaalada Beladweyne ee xarunta gobalka Hiiraan.
General Maxamed Aadan Bixi oo ku geeriyooday dalka Canada
Madaxweyne JFS oo tacsi u diray Raiisul Wasaarihii hore ee dalka Cali Maxamed Geeddi geerida ku timid hooyadii